I-Zentyal, i-distro esemagqabini yokwenza iiseva zasekhaya | Ubunlog
Ukuqaliswa kwenguqulelo entsha yosasazo lweLinux "iZentyal 6.2" kusandula ukwaziswa Iyaqhubeka ukubakho eyakhelwe kwisiseko sephakheji ye-Ubuntu 18.04 LTS ninaeneemfuno ezizodwa ekudalweni kweeseva zenkonzo yenethiwekhi yendawo yeenkampani ezincinci neziphakathi.
Ukubandakanywa kolwabiwo kubekwe njengenye indlela yokuSebenzisa iShishini eliNcinci leWindows kwaye kubandakanya izinto zokutshintsha iMicrosoft Active Directory kunye neMicrosoft Exchange Server.
1 Malunga neZentyal
2 Malunga nohlobo olutsha lweZentyal 6.2
3 Khuphela okanye ufake
Amashumi amabini isasazwa kwiiphakheji ezimbini:
Ushicilelo loLuntu: Inazo zonke izinto zamva nje, ezinzileyo okanye hayi. Inkampani ayinikezeli ngenkxaso esemthethweni kwiingxaki zobuchwephesha. Iinkonzo zamafu azibonelelwanga ngoHlelo loLuntu. Inguqulelo entsha ikhutshwa rhoqo emva kweenyanga ezintathu ngenkxaso engekho mthethweni kwinguqulelo yamva nje. Abasebenzisi abanamda.
Ushicilelo loRhwebo: Ezinazo zonke izinto zamva nje, ezizinzileyo nezivavanyiweyo. Inkxaso ibonelelwa ngokusekwe kuHlelo oluShishino oluNcinci noluPhakathi. Iinkonzo zamafu zidityanisiwe kwiserver kwaye zisekwe kuhlobo lwe-SMB. Inani labasebenzisi abaxhaswe lushicilelo loRhwebo lusekwe kuHlelo oluThengiweyo lwe-SMB. Ushicilelo olutsha lukhutshwa rhoqo emva kweminyaka emibini kwaye luxhaswa iminyaka emine.
Ngapha koko iZentyal Server inehlelo lophuhliso enokukhutshelwa simahla kwaye ikhowudi yemithombo yayo iyafumaneka phantsi kwemiqathango yeGNU General Public License.
Iiseva zeZentyal kulula ukuzisebenzisa ngenxa ye-graphical interface yomsebenzisi (i-GUI). I-GUI ibonelela ngokulula kwaye inomdla ujongano kubo bobabini abanomdla kunye nabaphathi abanamava abanokuzisebenzisa.
Ezona mpawu ziphambili zolu hambo oku kulandelayo kuvela:
Inkxaso yemveli yeMicrosoft® Exchange Server protocols.
Inkxaso yeMicrosoft Outlook® 2007, 2010.
Inkxaso yemveli yeMicrosoft Active Directory® 2008, 2008 R2, 2012.
I-imeyile, iikhalenda, abafowunelwa.
Ungqamaniso nezixhobo eziphathwayo (inkxaso yeAustSSncnc).
Antivirus kunye ne-antispam.
Ipakishwe kwiseva esekwe kubuntu, kubandakanya isilawuli sedomeyini kunye nenkonzo yolawulo, iinkonzo zonxibelelwano ezisisiseko kunye neewonga.
Yonke imiba yosasazo ilawulwa kusetyenziswa ujongano olusekwe kwiwebhu, emanyeneyo malunga neemodyuli ezingama-40 ezahlukeneyo Ukulawula inethiwekhi, iinkonzo zenethiwekhi, iseva yeofisi, kunye namacandelo eziseko zophuhliso lweshishini. Ixhaswe ngumbutho womsebenzi okhawulezileyo wesango, i-firewall, i-imeyile yeseva, i-VoIP (i-Asterisk), iseva ye-VPN, ummeleli (iskwidi), umncedisi wefayile, inkqubo yokunxibelelana nabasebenzi, inkqubo yokubeka iliso, iseva yogcino, inkqubo yezokhuseleko. , iinkqubo zokungena zomsebenzisi nge-portal captive, njl.
Emva kofakelo, Imodyuli nganye ehambelana nayo ikulungele kwangoko ukwenza imisebenzi yayo. Zonke iimodyuli ziqwalaselwe ngenkqubo yewizard kwaye azidingi luhlelo lokwenza iifayile zoqwalaselo.
Malunga nohlobo olutsha lweZentyal 6.2
Ngokumalunga notshintsho olwenziweyo kuhlobo olutsha, olona lubalulekileyo lulandelayo:
Inkonzo yeAppArmor yongezwa (ikhubazekile ngokungagqibekanga);
Endaweni yeScanOnAccess, inketho ye-OnAccessExcludeUname isetyenziswa kwimodyuli ye-antivirus, inkqubo entsha yenkqubo ye-antivirus-clamonacc yongezwa, iprofayile yeApparmlam's Apparmor iyahlaziywa;
Ukuphuculwa kwengxelo yolawulo lobuchule;
Ukuhlaziywa kwephakheji yomthengi nge-OpenVPN Windows 10
Ukuhlaziywa koqwalaselo lwesixhobo kwimodyuli yokwenyani.
Khuphela okanye ufake
Ngokuzenzekela ababhekisi phambili banikezela umfanekiso we-ISO wale nkqubo Ukuququzelela ukusetyenziswa kweephakeji ezenzayo, oku kunokufumaneka kwiwebhusayithi esemthethweni yokuhambisa okanye ungayenza kwikhonkco elingezantsi.
Enye indlela yokusebenzisa iZentyal ukufaka yeephakheji zakho malunga nokufakela okwenziwe ngokulungeleyo kwe-Ubuntu 18.04 okanye enye into evela kuyo, nangona ingcebiso ikuluhlobo lweseva.
Iindlela ezimbini ezinikezelwa kule nkqubo, enye yazo isebenzisa iskripthi esinoxanduva lwenkqubo yonke esinokuyifumana ngokuchwetheza lo mthetho ulandelayo:
Okanye enye kukulandela amanyathelo achazwe kwiZentyal Wiki kule khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » I-Zentyal, i-distro esemagqabini yokwenza iiseva zasekhaya